Olee otú na-ere m ụgbọ mmiri online nzọụkwụ site nzọụkwụ bụ ụzọ dị mfe na otú m nwere ike ire m ụgbọ mmiri ngwa ngwa site online internet ahịa ọrụ
Olee otú na-ere gị Boat maka kachasi Ahịa
Ọ bụ ezi echiche na-n'ụgbọ mmiri e nyochara otú i nwere ike ịmụta banyere na idozi ọ bụla nwere nsogbu tupu ụgbọ mmiri na-aga na ahịa. Ọ bụrụ na ndị ala ma ọ bụ topsides mkpa a agba ọrụ, eme ya. Ọ bụrụ na ị na-egosipụta ndị ahu ihe, na-eji nanị na-acha ọcha ma ọ bụ ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ agba. Otú ọ dị, otu ore ahia-atụ aro bụghị okodu ego na electronic upgrades. Ị ga-esi obere akụkụ nke na ego azụ.
Ahịa na o ziri ezi. Ahịa na o ziri ezi. Ahịa na o ziri ezi.
Gaa na akara na ego nile nke internet saịtị. Yachtworld, Boat Trader, Boats.com wdg. wdg. Ibipụta a oyiri nke niile yiri ụgbọ mmiri ka gị. Rịba ama ngụkọta ọnụ ọgụgụ. Rịba ama igodo ọ bụla atụmatụ ndị ọzọ ụgbọ mmiri nwere ma ọ bụ na-adịghị. -Ele anya na ndị ọzọ ụgbọ mmiri engine awa, ọ nwere a ụgbọala na-adọkpụ, ala agba, wdg, wdg. Nke a bụ ihe dị nnọọ mkpa. Mkpa ka ị tụnyere apụl apụl. (Atụ - ala ese trailerable ụgbọ mmiri na-ere obere.) Rịba ama ebe ebe ụgbọ mmiri na-depụtara. (Atụ - Florida ụgbọ mmiri na-ere obere - okpomọkụ, anyanwụ, ifufe, nnu na afọ gburugburu ojiji.)
Kpọọ ole na ole Broka na nwere ụgbọ mmiri na-iji tụnyere gị. Gwa ha onye ị bụ na ihe i nwere. Kasị Broka kwesịrị nke na-ekwenyere. Jụọ ha mere n'ụgbọ mmiri ha depụtara adịghị ere. Jụọ ha ihe ha chere na ọ ga-ewe iji na-ere ha ụgbọ mmiri. Jụọ ha ihe ha na-eche gị ụgbọ mmiri bụ uru. Jụọ ha ma ha na-aga ahia ya ihe ha ga-enye gị n'ihi na ọ.
Lelee ịnye ọnụahịa nduzi BUC na NADA, ma adịghị etinye ukwuu okwukwe na ihe ha na-ekwu. Ọtụtụ n'ime ndị a, n'uche nke m, na-kpam kpam etịbe ma ha bụ ihe na-anoghi n'ulo oba idabere gị ụgbọ mmiri ego uru on. Ya mere ọ bụ ezie na etịbe ha ka bụ ndị ihe na-atụle.
Ugbu a nọdụ ala. Anya na niile data na ị na-anakọtara. Gbakọọ ihe ọ n'ezie efu jide na gị na ụgbọ mmiri maka ole na ole ọzọ ọnwa. Gwa onwe gị eziokwu! (Cheta: ihe i ji na gị ụgbọ mmiri nwere ihe ọ bụla na-eme na ya mkpọsa uru.) Echegbula onwe gị banyere etinye "wigul ụlọ" na nọmba gị. Ị ga na-enwe nsogbu banyere "ụlọ kpakorita" Ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-akpọ. Ugbu a ego gị ụgbọ mmiri na-esote onye na-ere. M na ọ bụ na-egbu mgbu ma anaghị m echeta ọ bụla na-ere ákwà mgbe na-agwa m "ha ha, M rere m ụgbọ mmiri ọnụ ala!"
Top Iri Atụmatụ nke na-ere Your Boat
1. Market ya!: Kpọsaanụ kpamkpam. Ebe mgbasa ozi na obodo boating pịa, nnukwu kwa ụbọchị akwụkwọ akụkọ na, ma ọ bụrụ na ọ bụ otu nnukwu ụgbọ mmiri ma ọ bụ otu n'ime mmachi nnweta na buyers ga-abụ na njem nke ala ịhụ, ebe mgbasa ozi na pricier mpaghara na mba venues. Foto dị mgbasa ozi ise ọzọ okporo ụzọ. Mgbazinye ohere na ụfọdụ okporo ụzọ na-n'akụkụ otutu ebe ọtụtụ narị passers-site pụrụ ịhụ na ọ-ihe karịrị gị driveway.
2. Chụọ n'ọrụ-elu!: Malite engine na-ekpo ọkụ ya otu awa tupu a atụmanya-abịa ịhụ ụgbọ mmiri ahụ. A nwụrụ anwụ batrị ma ọ bụ balky mmalite-ọbụna n'ihi ihe ndị magburu onwe engine-amama buyers anya.
3. Nkwa ịkwado: Ọdịdị dị mkpa. Ịgba-on ngwá ụlọ wax nwere ike etinyere na kpochapụrụ-apụ ngwa na mfe. The gleam anaghị adịru ihe karịrị otu ụbọchị, ma ọ bụ zuru okè n'ihi na atụmanya na-akpọku na-ekwu na ọ ga-n'elu ke otu awa.
4. Efu Nkwa: Ọ ka mma na-egosi efu stowage ebe na jaa otú saa mbara Ha na-ahụ na-enwe gị niile gear nnukota onu na ha ruo n'ókè nke jubigakwara ókè. Wepụ gị unyi.
5. Touch Points: A ọkachamara zuru ezu ọrụ na-eme ka uche maka a ụgbọ mmiri na pristine ọnọdụ. Ọ bụrụ na gị ụgbọ mmiri udu "nkezi" ma ọ bụ "ezi" na-elekwasị anya nanị na ihe glaring blemishes. Onyinye-esi nchara na-adịghị stains agba ọbara si oyiyi akwa, re-teepu shredded buut straipu, de-Griiz engine, hichaa bilge, wdg. Ọ bụrụ na ndị ụlọ bụ mgbọrọgwụ, surreptitiously ebe ikuku freshners.
6. Fogged-esi: Ọ bụrụ na doro anya ákwà-nkwuba na-kpụchara akpụcha ma ọ bụ ekochiela ihu site afọ, wepụ ha maka mbụ ikiri.
7. Bottom Job: Ọ bụrụ na ndị ụgbọ mmiri bụ ala na-ese, itinye a ọhụrụ uwe. Ọ na-eme ụgbọ mmiri anya sharper. Ọzọkwa ịgba agba outboard na n'azụ mbanye skegs na nwere agba eyi-apụ.
8. Oké osimiri Trial: Na kwaaji wepụrụ, niile ma nchekwa gear stowed mbenesụk na ìhè mmanụ ụgbọala na mmiri, gị ụgbọ mmiri uche ụgbọelu mfe, aka ọzọ nimbly, ma nweta a ngwa ngwa n'elu-ọgwụgwụ ọsọ. Agbalị kwenye asịwo amachi na-agba ịnyịnya-tinyere ndị enyi na ezinụlọ dị ka ole na ole dị ka o kwere, maka ihe n'elu, na otú ahụ ka ezi "roominess" nke ụgbọ mmiri adịghị mwute doro anya.
9. Akwụkwọ Chase: Nwere niile aha, registration, ogologo akwụkwọ ikike na, ma ọ dị, ọrụ ndia na aka na a nragide. Ọ bụ nnukwu, even if the buyer's initial reaction to it seems ho-hum.
10. Nwee Ezi: Chepụta gị ala-akara price ọma tupu nzute mbụ asịwo. Tụlee dollar akwụ ụgwọ nke mgbasa ozi, storage and maintenance while it's for sale as well as the time costs involved in showing the boat.
Wepụ ya: Three More Tips...
11. Shịị-Shịị: Adịghị ekpughe gị mma price n'elu ekwentị na onye na-ahụghị ụgbọ mmiri. Tupu a asịwo ahụ gị ụgbọ mmiri, ọ na-nwetara enweghị mmetụta uche ego. E wezụga, otú i si mara na ọ pụrụ ọbụna imeli ya? Plus, buyers nsu mgbe nwere enyi na-akpọ ka "ọhụrụ atụmanya" ná mgbalị ịkwada gị elu.
12. Ụgwọ ọnwa: Ego bụ eze. Akwụkwọ ndenye ego dị ukwuu-ozugbo ha ikpochapụ. Na-akpọ "Bank Achọpụtazi" na-adịghị dị ka gold. Ndị a niile na-eme na-"ichere" na asịwo nwere ego ego na akaụntụ ahụ na ụbọchị nke nke. Ha pụrụ ịkagbu n'ụzọ dị mfe dị ịkagbu a ego nkeonwe. Adịghị banye n'ụgbọ mmiri n'elu ruo mgbe ị mara na ị ga na-emefu asịwo ego.
13. Big Ajụjụ: -Azụ ahịa invariably ịjụ ihe mere ị na-ere. Ọfọn, maka ego nzuzu. Ma i nwere ike na-ekwu na (ma ọ bụ na gị na ike gwụrụ nke tinkering-enweghị abamuru nke a akwụkwọ ikike). Web mgbanwe ndị kasị mma azịza. Say you want to try cruising and can't do it in an open boat, gị na ụmụaka adịghị aga na unu agakwaghị otú ị na-adịghị mkpa a skai ụgbọ mmiri, ị na-adịghị azụ offshore ọzọ otú a igbubilata bụ iji, ihe ọ bụla.
Private Jet Air Charter Flight Service Iji The okomoko Omume Near Me